နောက်ကွယ်က နေဘာမဆို အကုန် ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် ကူညီတဲ့ ပိုင်တံခွန် အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့သူငယ်ချင်း ထက်ပိုင်ရဲ…. – Shwe Naung
နောက်ကွယ်က နေဘာမဆို အကုန် ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် ကူညီတဲ့ ပိုင်တံခွန် အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့သူငယ်ချင်း ထက်ပိုင်ရဲ….
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ် ကြီးရေ နှုတ်ခမ်းနီ မလေးတွေရဲ့သည်းသည်း လှုပ်ချစ်ခင် အားပေးခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်ဟာဆိုရင် ပြည်တွင်းမှာ သာမက ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ ပါအောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်တံခွန်က လတ်တလော ဖြဟ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ပြည်သူလူ ထုနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက် ကနေတစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့ပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အတွက်
ပုဒ်မ ၅၀၅(က)နဲ့တရားဆွဲ ခံခဲ့ရပြီး ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်း ခြင်းခံလိုက် ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန် အန္တရယ်ကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ ဖို့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေ ကဆုတောင်းပေးနေ ကြတာပဲဖြစ် ပါတယ်..။
အခုလည်း ပိုင်တံခွန်နဲ့ ငယ်ငယ်လေးက တည်းကကျောင်း အတူတူတတ် လာခဲ့တဲ့အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း ထက်ပိုင်ရဲ ကကြင်နာတတ်ပြီးစိတ်ရင်း ကောင်းတဲ့ အပြင် သူ့ကိုဓာတ်ပုံ ဆရာကောင်းတစ်ယောက် ဖြဟ်အောင် လက်တွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အကောင်းကို အခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ”
နယ်မြို့လေးကနေ တယောက်တည်း ရန်ကုန်မြို့ကြီးပေါ်တက် လာတော့ ပိုင် နဲ့ပြန်တွေ့တယ် ခုနစ် နှစ်ကြာပီးမှ ကျောင်းနေ ဖက်သူငယ်ကြီးနဲ့ ပြန်တွ့ရတာ သူအောင်မြင် နေတဲ့အချိန် ကျွန်တော် သူ့နဲ့စ တွေ့တော့ ကျွန်တော့မှာ အိပ်မက် လည်းမရှိဘူး လျောက်ရ မယ့်လမ်းလည်းမရှိဘူး သူကစ ပြောလာတယ်
မင်း အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တာ ဘာစိတ်ဝင် စားလဲဆိုပီး သူအောင်မြင်နေ တဲ့အချိန်တတ်နိုင် သလောက် Support ပေးမယ်ပြောတယ် မရေရာ မသေချာဘဲ မဖြေမိဘဲ ကျွန်တော် နယ်ကို ပြန်သွားမိတယ် တပတ်လောက် ကြာတော့ ပြန်ပြောဖြစ် တယ်..။
ငါ Video ရိုက်ချင်တယ် ကင်မရာ ကိုင်ပီး Video ရိုက်တဲ့သူဖြစ် ချင်ယ်ဆိုပီးပေါ့ သူကသူ့ဆီလာ သူနဲ့သိတဲ့ ဆရာတွေဆီမှာ အပ်ပေးမယ် ပညာသင်ပါ ဘဝကိုလျှောက် လှမ်းပါဆို ပီးတော့တကယ် ကျွန်တော် သူ့ဆီလာဖို့ အမေ့ဆီက ငွေတောင်းပီးလက်ထဲ ပိုက်ဆံ တသိန်းနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို မျှော်လင့်ချက် ကြီးနဲ့ သူ့ဆီ လာခဲ့တယ် တကယ်ရောက်တော့
သူက မင်းသူများ ဆီနေရင် သူများအလုပ်သမားပဲ ဖြစ်မှာ ငါ့သူငယ်ချင်းကို အလုပ်သမားတော့ မဖြစ် စေချင်ဘူး တကယ်ပညာ ကိုတတ်ပီး တကယ့် Professional life ကိုသွားစေချင် တယဆိုပီး ကျွန်တော့်ကို သူ့ဆီမှာ နေစေဲ့တယ်
သူ့ကအချိန် တခုပဲစောင့်ပါ သူအဆင်ပြေတာနဲ့ ကင်မရာ လေးတလုံး ဝယ်ပေးပီး မင်းကိုရသလောက် လေ့လာခိုင်းမယ်ဆိုပီး နေစေခဲ့တယ် စားဖို့မရှိ သောက်ဖို့မရှိ ဆေးလိပ်လေးတ လိပ်တောင် ဝယ်ဖို့ မရှိတဲ့ အခြေနေကပီး သူကျွန်တော့်ကို ကြိုးစားစေခဲ့တယ်..။
ပုံတွေမကောင်းရင် ပိုကြိုစား လာအောင် ဆူခဲ့တယ် သူတတ်နိုင်သလောက် Support ပေးခဲ့တယ် မခံချင်စိတ်နဲ့ ကြိုးစားပီးတ နှစ်ကျော်အကြာမှာ HPY Photography ဆိုပီးနာမည် လေးတခုဖြစ်လာခဲ့တယ် သူက အပြင်မှာတောင် သိပ်မရိုက်ခိုင်းဘူး သေချာတတ်မှ အပြင်မှာ ရိုက်ပါ ပိုက်ဆံရှာ ပါဆိုပီး Quality ကောင်းအောင် သေချာ လမ်းပြခဲ့တယ်
ဘဝမှာ ဘာမှမ ရှိတဲ့ ဘဝကနေ တဖြည်းဖြည်းချင်း အဆင်ပြေ လာတဲ့အထိ သူကျွန်တော့်ကို Support ပေးခဲ့တယ် သုံးစရာ မရှိရင် မုန့်ဖိုးတွေပေး ကျွန်တော့်ကို ရှင်သန် စေခဲ့တယ် သူတကယ်ကို ကြင်နာပီး စိတ်ရင် ကောင်းတဲ့ လူတယောက်ပါ အခုချိန်မှာ သူ့ကိုမလွမ်းဘူလားလို့ သူအထဲရောက်နေတာ တောင်အပြင်မှာ
Ro နေတယ် ဘာညာတွေ့တော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ် သူကဒုတိယ မိသားစုပါပဲ သူက အရာရာပါပဲ သူငယ်ချင်းကြီး ကို အရမ်လွမ်းမိပါတယ် အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွတ်မြောက်ပါစေ ပိုင်တံခွန်ဆိုတာ မရှိခဲ့ရင်
ကျွန်တော် ဆိုတာ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးဘာမှ မရှိတဲ့ကောင်ပါ ” ဟု ဆိုပြီးပိုင်တံခွန်ရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင် တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
Source ; Htet Paing Ye Facebook acc
မိလွန်း နေ တဲ့ အိန်ဂျယ်လမုန် ရဲ့ အလန်းစား ပုံများ…
မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ လှပပီး ကျက်သရေရှိနေတဲ့ ရွှေသမီး….
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှတရား‌တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး……..